Dr Abiy Ahimed: Magaalaa Ambootti MM ''Isin akka mixii malee akka Kuruphisaa hin tahiinaa,'' jechuun barattotaaf ergaa dabarsan - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, PM Office Ethiopia
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimed har'a gara magaalaa Ambootti imaluun Mana Barumsaa Qophaa'inaa Amboo daawwataniiru.
Barattootaa fi hawaasa mana barumsichaa fuulduratti ba'uun xiyyeeffannaa barnootarratti akka taasisan dhaamsa dabarsaniiru.
Dubbii isaanii keessattis goototnii fi beektotni hedduun Ambo keessaa akka bahan dubbachuun isaanis har'a irra dhaabbatanii fagoo yaaduu isaaniitiini jedhan.
''Waan moofaa tahe hubatanii waan haaraaf waan qabsaa'aniif ,'' jedhanii, isin keessaas beekaa hedduutu baha jechuun barattootaaf ergaa dabarsan.
'Haala har'a keessa jiru namni hin barre fagoo deemuu hin danda'u' kan jedhan Dr Abiy Ahimed fagoo deemuu yoo barbaaddan waan amma keessa jirruu fi isa dhufuuf jiru hubachuun baay'ee murteessaadha jedhan.
''Isin akka mixii malee akka Kuruphisaa hin tahiinaa,'' Abiy Ahimed. Dhaloonni kun akkuma mixii waan boru dhufuuf jedhu hubatee, of qopheessee, wal dhaggeeffatee kan deemu yoo tahe fuuldureen biyya kanaa abdachiisaa taha jedhan Ministirri Muummee.
Yaada barattoota Amboo
Ministirri Muummee akka magaalicha dhaqan dursanii akka hin beekamne baraataan BBC'n dubbise tokko himeera. Erga Abiy barattootaaf ergaa dabarsaniis yaadotni tokko tokko ka'aniiru.
Yeroos Heeyyii barattoota mana barumsichaa bakka bu'uun uummanni Oromoo wal dhabdee paartilee siyaasaa Oromoo gidduutti uumamaa jiru ilaalchisee yaaddoo waan qabuuf mariidhaan hiikkachuu qabdu jechuun MM Abiy Ahimediif yaada akka kenne BBCtti himeera.
''Paartileen kaleessa akka diinaatti wal ilaalaa turtan amma gara biyyaatti erga wal galchitaanii wal dhabuu hin qabdan'' yaada jedhu dhiyeesseef jedhe. Barataa Yeroos Dr Abiy ''isin maal narraa barbaaddu'' jechuun dhuunfaadhaan na gafatan jedhe.
''Nuyi isin irraa homaa iyyuu hin barbaannu, bishaanii fi ibsaa yoo tahe booru iyyuu nuuf dhufa. Kan nuyi isin irraa barbaannu dhangala'uu dhiigaa achii as nutti deemaa jiru gadi taa'aatii Daawud Ibsaa waliin mari'adhaatii nurraa hir'isaa jechuun gaafanne,'' jedhe.
Ministirri Muummees isin yaaddoo hin qabaatiinaa nuyi wal dhabdee keenya hiikanna jechuun akka deebisaniif dubbate.
Haa tahu malee Ministirri Muummee tasa maaliif gara magaala Amboo dhaqan kan jedhu ilaalchisee barataa Yeroos Heeyyii, gidduu kana uummata keessa mufiin waan jiruu fi sochiin jalqabuu danda'a odeeffannoon jedhu waan jiruuf dhufuu hin hafne jedhe.
Paartileen lamaan ABO fi ODP'n Asmaraatti waliigaltee raawwatan waan qabaniif ammas isa kabajuu akka qaban amanna jedhe.
Dabalataan uummanni shira qaamni kamiyyuu taayitaarra turuufis ta'e taayitaatti dhufuuf hojjetu dura ni dhaabbata jedha.
Waraanni ABO's bosona keessatti kan biqile osoo hin taane uummata keessaa waan baheef akka dhabamsiifaman waan hin feeneef karaa nagaa xumuramuu qaba yaada jedhutu uummata keessa jira jechuun BBCtti hime.
Mootummaanis aangoo fi humna biyya bulchu waan qabuuf wal dhabdee gidduu isaanii jiru furuuf carraaquu qaba jedhee uummanni magaalichaa akka amanu hime.
Mootummaan tarkaanfii fudhatee uummata irratti gaaga'amni osoo hin dhufiin '' Daawud Ibsaa waliin gadi taa'anii mari'achuu akka qaban'' Dr Abiy gaafanne jedhan.
Muummichi ministiraa Dr Abiy daawwannaa Ambootti taasisan keessaa taateewwan muraasa
Ministirri Muummee Abiy Ahimed kanaan dura Amboon iddoo handhuura qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uusheetiin siidaan Bilisummaa Oromoo achitti gadi dhaabbatan jedhanii turan.
'Ministirri Mummichaa carraas qormaatas qabu'
'Poolisiifi raayyaan okkara warra uuman seeratti dhiyeessaa'
Wayita isaan Mana Barumsaa qophaa'inaa Amboo daawwatanis hawaasni mana barumsichaa gammachuun simateera jedhan, Daayirektarri Mana Barumsichaa Obbo Tashoomee.
''Waan hundaaf barnoonni bu'uura akka ta'e, bakka yaadan ga'uuf jabaatanii barachuun murteessaa akka ta'e, kanaafuu barattoonni collummaadhaan barachuu akka qaban dhaaman'' jedhan Barsiisaa Tashoomeen.
Barattoonni erga daree seenanii booda akkuma carraa dhufan. Ergasii barattoonnis daree yaa'anii simatan.
Ministirri Muummees barattootaa fi hojjettoota mana barumsichaa fuulduratti barattoonni akka barnootasaaniitti cichan ergaa dabarsan jedhu barsiisaa Tashoomeen.
Wayita Ministirri Muummee Abiyyi Ahimad dhufan hunduu gammachuudhaan simate kan jedhan barsiisaa Tashoomeen.
''Uniin kun baayyee nu gammachiisa. Dhufanii barattoota ilaaluun isaaniiyyuu waan guddaadha. Ijoollee oladeemaa jiran kanaaf hamilee gaariidha,'' jedhan.
Ministirri Miimmee Dr. Abiy Ahimad namootaafi garee okkarri akka saboota gidduutti uumamu fagoofi dhiyoo taa'anii hojjetan isa dhumaa qalbii jijjiiratanii waamicha dhumaa gara nagaatti akka dhufaniif taasifamee didanii poolisiifi humna waraanaa seeratti akka dhiyeessan ajajan.